Firegraphic (portable) @nyinaymin
Portable ပါပဲ . ဓါတ်ပုံတွေကို ပြုပြင်မယ့် . အရောင်ဖြည့်မယ့် . ကာလာ ပြောင်းမယ့် အလုပ်တွေကို လုပ်လို့ရပါတယ် . အသေးစိတ်ကို သိချင်ရင် မူရင်းဆိုက်မှာ သွားလေ့လာ လိုက်ပါ . tutorial တွေကိုပါ တင်ပေးထား တာကိုတွေ့ရပါတယ်...
သူ့ရဲ့ မူရင်းဆိုက်ကတော့ ဒီမှာ ပါ .. အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် .
Download ifile.it ၊ Download megaupload ၊ Download mediafire ၊ Download nyinaymin.net ၊ Download 4shared